Donald Trump oo dalbaday in ay Is-casisho Ilhaan Cumar – Kalfadhi
Donald Trump oo dalbaday in ay Is-casisho Ilhaan Cumar
February 13, 2019 Kalfadhi
Donald Trump Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa si kulul uga hadlay hadalo dhawaan ka soo baxay Ilhaan Cumar oo katirsan Xisbiga Dimuqraadiga sidoo kalane katirsan Aqalka Senatka ee dalka Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa Ilhaan Cumar ugu baaqay in ay is-casisho maadaama ay adeegsatay erayo Yahuud naceyb ah oo ay ku soo qortay barteeda Twitterka. “Yuhuud Naceybku meelna kuma laha Congresska dalka Maraykanka, Waa inay iska casishaa Kongresska iyo guddiga arrimaha dibada oo ay xubinta ka tahay.””ayuu yiri Madaxweyne Donald Trump
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in hadalka Ilhaan Cumar uu yahay mid aad u fog oo kaga yaala gunta hoose ee qalbigeeda, sidoo kale waxa uu sheegay in aysan suurta gal ahayn in ay ku sii tirsanaato Aqalka Senatka Mareykanka “Hadalka ay sheegtay waxa uu kaga yaalaa gunta hoose ee qalbigeeda” ayuu yiri Trump. “cudurdaarkeeda waa mid daciif ah oo aysan daacad ka ahayn.”ayuu hadalkiisa raaciyay Trump.
Nancy Pelosi oo ah Af-hayeenka Kongresska Mareyknka iyo hogaamiyaasha kale ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa sidoo kale cambaareyay hadalka Ilhan waxayna ugu baaqeen inay cudurdaar ka bixiso taasoo ay aqbashay Ilhan, cudurdaarna ka bixisay hadaladii ay ku weerartay ururada Yuhuuda taageera.
Waa Gabadhii ugu horreysay iyo Gabadhii 2aad ee Muslim ah oo xil ka qabta Aqalka Senatka Mareykanka, Ilhan Cumar sidoo kale waa Gabar asalkeedu Soomaali yahay Ilhaan waxay katirsan tahay Guddiiga Arimaha Dibadda ee Congareeska Mareykanka, waxayna wajaheysaa cambaareyn badan.
Golaha deegaanka Qardho oo go’aamiyay u qareemidda dhismaha xaruunta Jaamacadda Ummada ee degmadaas.